Noocyada Jasmine, Faa'iidooyinka Caafimaadka iyo Sameynta
Teas Cuntada American Qaamuuska Culin-ka
Waa maxay Shaaha Jasmine?
Shamso Jasmine guud ahaan waxay tilmaamaysaa shaaha (ma aha " shaaha geedaha ") kaas oo lagu qurxiyey ubax jasmine ama dhadhan. Jasmine shaaha waxaa badanaa laga sameeyaa shaaha cagaaran.
Noocyada Shaaca Jasmine
Inkastoo noocyada ugu caamsan ee jasmine shaaha waa shaaha cagaaran ee jasmine, jasmine shaaha , jasmine oolong , iyo jasmine madow ayaa sidoo kale jira. Xaaladaha qaarkood, isbeddelladani waa uun shaaha-macaan oo jasminees ah, halka xaaladaha kale, ay ka mid yihiin isku darka badan, sida shaah macmacaanka .
Marka laga reebo nooca shaaha , shaaha jasmine ah ayaa sidoo kale kala duwan caleemaha loo isticmaalo in lagu sameeyo iyo qaababka.
Qeybaha cagaaran ee jasmine kala duwan ayaa lagu sameeyaa fasalada kala duwan ee shaah cagaaran. Sida ugu fiican waxaa lagu sameeyaa saamiga weyn ee burooyinkeeda shaaha ah si ay u noqdaan caleemo shaah. Kuwani waxay yeelan doonaan dhadhan jilicsan, dhadhan jilicsan marka loo eego shaagga oo lagu sameeyay caleemo waaweyn iyo burooyinkeeda yar.
Qaar ka mid ah jasmine-ka qaar ayaa ka tagay shahladaha dabiiciga ah ee dabacsan , qaarna waa la jaraa si loo geliyo bacaha shaah. Qaar kalena waxaa loo qaabeeyay noocyo kala duwan. Kuwa ugu caansan waa kuwan loo yaqaan "jasmine jasmine," oo ah digirta, xoqan laba loodh iyo caleen (inta badan). Qaab kale oo caan ah waa shaah ubax ah ubax leh ubax jasmine ah ee dhexda.
Sidee shaaha loo yaqaan "Jasmine"?
Cagaarshaha cagaaran ee dhaqameedka ah ayaa la goostay, laga sameeyay shaaha cagaaran, oo la keydiyay ilaa ubaxa ubaxa ee ubaxa, ka dibna dib u qurxiyo inta lagu jiro geedi socodka maaliyadeed. Waxaa jira laba siyaabood oo shaaha loo dhalaalin karo jasmine.
Habka qallafsan iyo qaali ah, ubax cusub ubaxa waxaa lagu meeleeyaa saxaarad ka hooseysa saxaarada dhuxusha ee caleemaha shaaha ah qol diiran. Ubaxyada ubaxa ah ayaa badanaaba badalaya, kharash weyn, si shaaha loo siiyo qoyaan, caraf udgoon iyo dhadhan. Kadibna, shaaha waa la qalajiyey oo la xirxiray si loo iibiyo.
Qodobka labaad, habka jaban ee samaynta shaah cagaaran oo leh ubaxyo jasmine ah, ubaxyada qoyan ee laga soo bilaabo geeddi-socodka ugu horreeya waxaa lagu qasi karaa caleemaha cagaaran, ayaa loo oggol yahay inay ku faafaan carafkooda, ka dibna ka soo baxaan shaaha ka hor inta aanay shaaha la qalajiyey oo la xirxiray.
Mararka qaar, ubax yar oo jasmine ah ayaa ku sii jiri doona shaaha marka la iibiyo.
Qaar ka mid ah jasmine cagaaran ayaa la dhajiyay saliid dabiici ah oo dabiiciyan ah, dhadhan dabiici ah oo dabiiciga ah, dhadhan macmacaan ah ama isku dhaf ah ubaxyo jilicsan. Inkasta oo saliida dabiiciga ah ee saliida ah ay aad u qaali tahay (mid ka mid ah saliidaha ugu qaalisan adduunka, dhab ahaantii), qaabka dhadhanka cagaaran ee qaxwada cagaaran ayaa loo tixgeliyaa inay ka hooseyso shaaha caadiga ah ee jasmine.
Guud ahaan, shaaha jasmine waa mid caafimaad qaba sida shaaha loo isticmaalo in la sameeyo ka hor inta aan la karaynin. Hase yeeshee, waxaa jira faa'iidooyin dheeraad ah oo la xiriira waxyaalaha dabiiciga ah ee jasmineerka, oo cilmi-baarayaashu ogaadeen in ay udub dhaxaad u tahay raaxada dabaasha ee dabiiciga ah marka loo eego hoos u dhigista garaaca wadnaha. Intaa waxaa dheer, dhadhanka jasmine waxaa laga yaabaa inay dadka ku qanciyaan in ay cabaan marar ka badan shaaha aan la karinin, iyo shaaha aad cabto waa mid aad u caafimaad badan adiga oo shaah ah oo ku fadhiya boorsadaada! Dadka qaarkiis ayaa sidoo kale sheeganaya in Jasmine uu u dhaqmo sida aphrodisiac. (Marka aad u maleyneysid shaaha ahaa rifay!)
Fadlan ogsoonow in ay jirto khatar ah oo la xidhiidha cabista qadar badan oo jajmine ah xilliga uurka iyo in shaaha jasmine uu yahay cabitaanka ugu fiican ee dhexdhexaad ah.
Sidoo kale, halka shaaha jasmine (sida noocyo badan oo shaah ah ) ayaa la sheegaa in ay kordhiyaan dheef-shiid kiimikaadka, waxaa ugu wanaagsan in laga fogaado cabitaanka calool madhan, maadaama ay tahay mid acidic ah oo keeni karta raaxo daro.
Samaynta & Cabidda Shaaha Jasmine
Jasmine shaaha ayaa sida caadiga ah ku habboon biyo la sifeeyay oo qiyaastii 190 darajo Fahrenheit (cawska, oo aan karkarin). Saddex daqiiqo badiyaa waa badanaa. Qiyaas ahaan hal shaaha oo ku filan shaaha jasmine jasmine waa fiican tahay, laakiin waxaad isticmaali kartaa shaah yar ama biyo ka badan haddii aad dillaacayso jasmine jasmine (oo kaliya qaadata dhowr lakab koob) ama shaah ubax ah (mid "ubax" waa ku filan loogu talagalay mug weyn ama dheriga oo dhan shaaha).
Markaad cabto shaaha jasmine, hubso inaad ku raaxaysato ariideedka iyo jilicsanaanta jilicsan. Haddii kaba-sii-daba-qabashadu tahay mid ciriiri ah ama xargo, isku day shaaha kale ee jasmine ah, hoos u dhig heerkulkiisa kulul ama aad gaabisid wakhtigaaga.
Tayo wanaagsan oo qumman oo jasmine ah waa in uu ahaadaa mid nadiif ah oo nadiif ah, oo leh caraf udgoon iyo dabayl ka dib sida cadar cad oo qurux badan.
Jasmine shaagaha si fiican ayey u cuntaa cuntooyin badan, sidaa daraadeed waxay dareemaan bilaash in ay tijaabiyaan shaaha jasmine!
Waxa kale oo loo yaqaanaa: Jasmine green green
Bixinta Faa'iidooyinka Caafimaadka ee Shahaadada Nettle
Noocyada kala duwan ee shaaha la iibiyey
Fahmidda Noocyada Shaaha
Wax kasta oo aad ka ogaato ku saabsan Shaah Caano
Waa maxay faleebada shaaha?
Qodobka Shaaha Dhirta
Charmglow Gourmet Series Foornada 720-0536 - La joojiyo
Digaag leh Bacon iyo Bambo Cagaaran
Mucaaradka casaanka ah
Savory Pumpkin Quesadillas Iyada oo basasha, Corn iyo Poblano Peppers
Macmacaanka Qadada Dareemka Maqaarka Dareemka Dufanka Bariiska
10 Cunto iyo Bok Kursi Bok Choy
Egg iyo Sausage Quruxda Quruxda leh Quruxda leh Caanaha
Potost Latitude Low Fatta
Qoraalka iyo isticmaalka
Dhir daaweedka & dhirta
Cuntada Cadaanka Cagaaran ee Bilowga ah